[AJD ALARM]: Martin Vrijland
Ndi AIVD ọ nụchara ụzọ nke East German (DDR) Stasi na Netherlands?
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 September 2017	• 19 Comments
Stasi bụ ihe kasị mkpa na East German ọgụgụ isi na ọrụ nchebe n'oge Agha Nzuzo, a hụkwara ya dị ka onye kasị dị irè n'ụwa. Stasi bụ ọrụ nzuzo na ndị KGB nke Soviet Union siri ike. Ọ bụ ezie na Stasi na 1990 mgbe a kwụsịrị mgbidi Berlin ahụ, a ga-ebuli ya elu, [...]
Nnwere onwe ikwu okwu, ikwu okwu na iche echiche nwere ike ịpu n'ime otu afọ
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 September 2017	• 19 Comments
Ọ bụrụ na ị na - eche "Oh, nke ahụ agaghị aga ngwa ngwa," i geghị ntị. Dịrị gị n'ubu na ị na-eche: "Oh, ọma, mgbe ahụ ị na-erughị na-ekwu ihe ị na-eche na, na na onye na mkpa m na uche banyere ihe ọ bụla na ihe niile na-enye," [...]
Ndi odu ma obu abughi 'nmekorita nwatakiri na umuaka'?
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 August 2017	• 27 Comments
A ghaghị kpochapụ obere nghọtahie. Mgbe m na-ekwu na Ronald Bernard bụ ihe omee na-eji NLP usoro ibu Ọṅụ Bank ka kwenye ndị mmadụ sonyere a akụkọ na-arịọ ndị ha na izu ọjọọ theorists, ọ pụtaghị na n'ụzọ mmekọahụ na àjà ememe okpukpe nke [...]
Ihe ndabara Ronald Bernard na nchikota nke ndu ndi nkwekorita
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 August 2017	• 16 Comments
Mgbe Intanet na-abịa na ya dị oke egwu, ị gaghị echere ọsọ ọsọ ma ịchọta ma gbanwee ozi ndị ọzọ. Anyị maara ugbu a mma na ọ bụghị n'ihi na ọ tọrọ ọgbọ bụ mgbe e nweghị mobile phones-abụ na ihe jogburu onwe ochie gaferela oge ebe ị na-adịghị amasị [...]
Ronald Bernard, Irma Schiffers, Ad Broere, Media Co -peratie Vrije Media: netiwu nchekwa AIVD maka ndị na-achọ eziokwu?
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 August 2017	• 55 Comments
N'isiokwu a, m ga-achọ ịkọwakwu ihe mere m ji kwuorịrị na isiokwu ole na ole na mgbasa ozi ọzọ na Netherlands na-achịkwa. Enwere m uche na 'ịchịkwa ọrụ nzuzo'. Na Netherlands, a na-akpọ osisi ahụ AIVD. Iji gosi nke ahụ, ị ​​ghaghị inwe [...]
Ronald Bernard nakweere ezi onye nkiri site na mgbasa ozi ọzọ
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI, Ihe atụ	by Martin Vrijland	na 14 August 2017	• 74 Comments
M nwere na-adịbeghị anya ọnwa na-ajụ, "Gịnị ka i chere nke Ronald Bernard?" M mgbe niile izere ajụjụ ma ọ bụ zara nkenke ma na-akasị dị nnọọ anya na otú ọma ndị mmadụ ga-eje ije n'ime ndị dị otú ahụ a onya. N'ihi na Ronald Bernard bụ onye omee, na-anọchite anya m dị ka osisi n'elu mmiri. Ọ bụghị na m bụ [...]
'Desinfo agents & ndị ọbịa' VERSUS 'na-egosi ezigbo nsogbu n'ụwa & bido ime ihe'
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 June 2017	• 7 Comments
Ọ bụ oge a na-emekarị ịkọ maka 'matriks'. N'okwu m ikpeazụ banyere Martijn van Staveren, akọwara m ihe ndị ọkachamara na-eche n'echiche m dị ka nchekwa maka edemede na mgbe ahụ na-enyefe ihe omuma na ihe ọmụma na-atụ anya ịbịaru [...]
Frans Heslinga nke ụwa dị nro ndị na-agwọ ọrịa uche na-eche echiche dị oké njọ?
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 July 2016	• 24 Comments
N'ezie, ọ ka mma ịghara ileghara ụdị ihe ndị a anya, mana Frans Heslinga na-emegharị ugbu a n'ime mgbasa ozi ọzọ na mgbasa ozi kachasị, na ị ghaghị ịkpọ aha ya. O doro anya na a na-emepụta atụmatụ ọhụrụ nke ime uche (psychological operation) iji kwado ụdị ọ bụla dị iche iche nke na-eche echiche efu. The 'flat [...]
Echiche ụwa dị ala, dị ize ndụ dị ize ndụ!
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 July 2016	• 8 Comments
N'izu gara aga, ana m ama ụma nke a na-akpọ 'okpukpu ala', n'ihi na mberede, enwere nnukwu esemokwu kemgbe 2015. Ọ bụ, n'ezie, azuzu zuru ezu nke olulu, nke na onye ọ bụla nwere obere ihe ọmụma banyere mgbakọ na mwepụ na physics nwere ike zoro aka n'ala nke akụkọ, ma mmalite nke a 'ije' [...]
Uwa ala ma ọ bụ ihe dị nro Ụwa nke na-eme ka ndị na-eme nchọpụta dị n'okpuru ìgwè mmadụ
gbara akwụkwọ [AJD ALARM], OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 June 2016	• 22 Comments
Na Internet agbawa oge fim, YouTube ọwa na Web ndekọ n'ịrụ yiri oké njọ nchoputa n'ime otú mainstream media na oruru na-aghọ aghụghọ anyị. Ndị a chọpụtara na-abịa site na ezigbo nnyocha. Ma ihe na-eme ugbu a bụ na ndị a chepụtara (nnọọ smart na nụchara anụcha) ike jikọrọ "na-eme nnyocha" larịị [...]
Nleta ha: 4.218.105
gt1987 op Coronavirus covid-19: ihe anyị anaghị anụ banyere Maurice de Hond na Willem Engel, akụkụ nke 2